Ciidanka Amniga Puntland (PSF) waxay maanta 20 February, 2018 hawlgal dagaal oo qorshaysan oo ka dhan ah cadowga Al Shabaab ka fuliyeen Buuraleyda deegaanada Dhadhaabo iyo Ceeldibir ee Buuraha Cal Madow,Puntland, Soomaaliya.
Intii hawlgalkani socday, waxay ciidanka PSF dileen 3 xubnood oo ka tirsan cadowga Al Shabaab , tiro kale oo intaa ka badana waxay gaarsiiyeen dhaawacyo.
Dhanka kale, ciidanka PSF waxay gacanta ku soo dhigeen 2 maxbuus oo ka tirsan ururka argagixisada Al Shabaab, kuwaas oo loo gudbiyey xabsiyada magaalada Bosaso.
Read more about Ciidanka PSF oo dilay dhagar qabayaal katirsan argigixisada kuwa kalena gacanta ku dhigay.
WHO ayaa ka digtay sara u kaca kiisaska Jadeecada ee qaaradda Yurub
Waxaa sare u kacey 400% kiisaska cudurka 2017-dii marka la barbar dhigo sanadkii ka horeeyey ee 2016-kii
Read more about WHO ayaa ka digtay sara u kaca kiisaska Jadeecada ee qaaradda Yurub
Tababarihii xulka qaranka Kenya oo iscasilay
Xiriirka kubadda cagta Kenya, ayaa xaqiijiyey in Paul Put uu iska casiley tabaranimadii kooxda Harambee Stars ee xulka qaranka Kenya.
Read more about Tababarihii xulka qaranka Kenya oo iscasilay
Ciidanka amniga ee ka howlgala kantaroolka konfureed ee magaalada Garowe, ayaa gacanta ku dhigay labo nin oo looga shakisan yahay iany katirsan yihiin kooxda Alshabab.
Labadaan nin ayaa xalay ka dagay gaari xamuul ah oo siday Ari, kaasoo ka yimid magaalada Baladweyne kuna wajahnaa magaalada Bosaso, sida uu sheegay taliyaha qeybta booliiska gobolka Nugaal gaashanle Faarax Cabdiaxmaan Warsame (Galangooli).
Read more about (DHEGAYSO) Ciidanka kantaroolka Garowe oo qabtay Rag looga shakisan yahay inay katirsan yihiin argigxisada.
Kulanka caawa ee Chelsea iyo Barcelona
Ciyaar adag ayaa caawa dhexmari doont kooxaha Chelsea iyo Barcelona.
Read more about Kulanka caawa ee Chelsea iyo Barcelona
''Addoon ahaan ayaa afar jeer Liibiya la iigu kala iibsaday''
Maxamed Cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay tahriibayaal Soomaalida oo dhawaan laga soo daayay xabsiyada Liibiya oo Muqdisho lagu soo celiyay.
Read more about ''Addoon ahaan ayaa afar jeer Liibiya la iigu kala iibsaday''
Boqol qof oo ku dhimatay duqaymo ay gaysteen ciidamada dowladda Suuriya
Duqaymo ay ciidamada dowladda Suuriya la beegsadeen bariga Ghouta ayaa waxa ku dhintay tira dad rayid ah, sida ay sheegeen kooxda la socodka xaalladda Suuriya.
Read more about Boqol qof oo ku dhimatay duqaymo ay gaysteen ciidamada dowladda Suuriya
Taliska Booliska qaybta ee gobolka nugaal ayaa maanta warbaahinta u soo bandhigay gaar nooca candho meedlaha looyaqaan oo siday 50 kartoon oo timir dhacday ah.
kar toomadii ay ku jirtay timirtan ayaa lagu buufiyay taariikh buufis ah oo aan ahayn tii loogu talagalay ee ahayd waqtigeedii rasmiga ah.
Warbaahinta ayaa sidookale latusay muuqaalka timirtan oo gabi ahaanba isbadalay ,kaas oo aan ahayn mid la isticmaali karo.
Read more about Faah Faahin :Ciidamada Booliska G/Nugaal Oo Garoowe ku qabtay Gaari siday Raashin dhacay
Wax gadarka iyo cuqaasha degmada Towfiiq ee gobolka mudug ayaa ku howlan dadaalo ay ku dhex dhexaadinayaan beelo dhawaan ku dagaalamay degmada Towfiiq.
Nabadoonada ayaa sheegay in haatan nabadaynta labadaasi beelood ay meel wanaagsan umarayso oo labada dhinacna laysa soo hor fariisiyay si xal looga gaaro waxa ay kala tabanayaan.
Read more about (Dhagayso) Beelo lagu heshiisiinayo Degmada Towfiiq iyo Ceel biyood kii degmada oo kooxo Hubaysan ay Soo weerareen
Taliska ciidanka booliiska gobolka Nugaal ayaa warbaahinta uga yeeray saldhiga bartamaha Garowe, halkaas oo goor dhow lagusoo bandhigayo gaari Xamuul ah oo sida Raashin dhacay oo la doonayay in la galiyo suuqyada Puntland.
Ciidankaan amniga ayaa qabtay gaarigaan, kadib markii ay xogtiisa heleen, waxaana lagu xiray isaga iyo raggii wadayaasha ka ahaa saldhiga dhexe ee Garowe.
Faahfaahin intaan ka badan goor dhow la socda.
Read more about BREAKING NEWS:- Saraakiisha booliiska gobolka Nugaal oo warbaahinta usoo bandhigaya Raashin dhacay oo la qabtay.